नयाँ Chitose एयरपोर्ट! सप्पोरो, निसेको, फुरानो आदिमा पहुँच। Best of Japan
यात्रु र व्यक्ति = शटरस्टकको साथ नयाँ Chitose एयरपोर्टको चौबाटो दृश्य
जापान मा यातायात! जापान रेल पास, शिन्कानसेन, एयरपोर्टहरू आदि। >
नयाँ Chitose एयरपोर्ट! सप्पोरो, निसेको, फुरानो आदिमा पहुँच।
नयाँ Chitose एयरपोर्ट होक्काइडोको सबैभन्दा ठूलो एयरपोर्ट हो। यो लगभग minutes० मिनेटको दूरीमा जेआर एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा सप्पोरो शहर केन्द्रबाट छ। यो एयरपोर्टसँग अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल र घरेलु टर्मिनलहरू छन्। यदि तपाईं होक्काइडोमा सप्पोरो, निसेको, ओटारु इत्यादिको वरिपरि यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले नयाँ Chitose एयरपोर्ट प्रयोग गर्नुपर्छ। यस पृष्ठमा, म नयाँ Chitose एयरपोर्टको विवरण प्रस्तुत गर्दछु। म नयाँ Chitose एयरपोर्ट को रूपरेखा पहिले परिचय गर्दछु, त्यसपछि, म विदेशबाट धेरै पाहुनाहरु के जान्न चाहान्छु व्यक्तिगत रूपमा वर्णन गर्नेछु।
नयाँ Chitose एयरपोर्ट फ्लोर नक्शा
लिमोसिन बसहरू द्वारा
JR ट्रेन द्वारा (न्यू Chitose एयरपोर्ट स्टेशन बाट)
एक कार भाँडा द्वारा
नयाँ Chitose एयरपोर्ट साप्पोरोमा
नयाँ Chitose एयरपोर्ट Niseko
फुरानोमा नयाँ Chitose एयरपोर्ट
पसल र रेस्टुरेन्ट
नयाँ Chitose एयरपोर्ट, होक्काइडो = शटरस्टकमा सेनाको हवाईजहाजमा वेर्नेस मर्मत गर्ने कामदारहरू
छुट्टै पृष्ठमा Google नक्सा प्रदर्शन गर्न क्लिक गर्नुहोस्
नयाँ Chitose एयरपोर्ट का घरेलू उडानहरु बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलहरू छन्। त्यहाँ एयरपोर्टमा JR नयाँ Chitose एयरपोर्ट स्टेशन छ, यो साप्पोरोमा राम्रो पहुँच हो। एयरपोर्टमा भाडा कार कम्पनीहरूको काउन्टरहरू छन्। उनीहरूसँग काउन्टरमा एउटा रिसेप्शन डेस्क छ र पार्किंगमा नि: शुल्क बस। यदि तपाईं मिनामी Chitose स्टेशन जानुभयो जुन जेआर न्यू Chitose एयरपोर्ट स्टेशन भन्दा अगाडि एक स्टेशन हो तपाईं कुशिरो, ओबिहिरो आदि जाने JR एक्सप्रेस ट्रेनमा सवारी गर्न सक्नुहुन्छ।
R० मिनेट JR एक्सप्रेस ट्रेन द्वारा
कार द्वारा २ घण्टा, २ घण्टा minutes० मिनेट - hours घण्टा minutes० मिनेट बस द्वारा (स्की रिसोर्टमा निर्भर गर्दै)
नयाँ Chitose एयरपोर्ट, निर्धारित उडानहरू निम्न एयरपोर्टहरूसँग सञ्चालन हुन्छन्।
बैk्कक (डन म्याANG्ग), हZ्झाउ, क्वालालम्पुर, सिंगापुर, नानजिंग, मनिला, चेओन्जुजू, भ्लादिभोस्टोक, वाई - साखलिS्स्क, BUSAN, SEOUL, Daegu, बीजिंग, टियानजिन, शंघाई, TAIPEI, हONGकONG, KOKUUAN, BOL
घरेलु उडानहरू (होक्काइडो)
हाकोडाते, कुशिरो, मेमानबेत्सु (अबाशिरी), वाककनै, नकशिबेत्सु
घरेलु उडानहरू (होक्काइडो बाहेक)
यामागाता, फुकुशिमा, निगाता, तोयामा, कोमात्सु, इबाराकी, मत्सुमोटो, शिजुओका, चुबु अन्तर्राष्ट्रिय (नागोया), हनेडा (टोक्यो), नरिता (टोक्यो), इटामी (ओसाका), कन्साई (ओसाका), अओमोरी, इवाटे हानमाकी, कोबे, ओकायामा, हिरोशिमा, मत्सुयामा, फुकुओका, ओकिनावा
होक्काइडो यात्राको बारेमा विवरणहरूको लागि कृपया तलको लेखमा क्लिक गर्नुहोस्।
न्यू Chitose एयरपोर्टको Panorama, Hokkaid मा सब भन्दा ठुलो एयरपोर्ट
यदि तपाईं यस छविमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने, नयाँ Chitose एयरपोर्ट (आधिकारिक वेबसाइट) को फ्लोर नक्शाको बारेमा पृष्ठ छुट्टै पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ।
नयाँ Chitose एयरपोर्ट एक अपेक्षाकृत ठूलो एयरपोर्ट हो। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन र घरेलु टर्मिनल भवन समावेश छ जुन माथिको छविमा देखिएको छ। यी दुई भवनहरू जडान भएका छन्।
यदि तपाइँ JR नयाँ Chitose एयरपोर्ट स्टेशन बाट ट्रेन को उपयोग करते हैं, कृपया घरेलू टर्मिनल भवन को भूमिगत तल मा जानुहोस्।
यदि तपाईं होक्काइडो रामेन, सुशी, आदि खान चाहनुहुन्छ भने, तपाईं घरेलू टर्मिनल भवनको तेस्रो तल्लामा जान सक्नुहुन्छ।
यदि तपाइँ नयाँ चिटोज एयरपोर्ट ओन्सेन (हट स्प्रि )्स) को मजा लिन चाहानुहुन्छ, यो डोमेस्टिक टर्मिनल भवनको चौथो फ्लोरमा छ। म यस पृष्ठमा तल समाचार चीटोज एयरपोर्ट ओन्सेनको बारेमा प्रस्तुत गर्दैछु।
यदि तपाईं नयाँ Chitose एयरपोर्टको फर्शको बारेमा अधिक जान्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया माथिको छविमा क्लिक गर्नुहोस् र आधिकारिक वेबसाइट प्रदर्शन गर्नुहोस्।
नयाँ Chitose एयरपोर्टबाट, होक्काइडोको विभिन्न भागमा जाने लिमोसिन बसहरू सञ्चालित छन्, होक्काइडो, जापान = शटरस्टक
धेरै लिमोसिन बसहरू न्यू चिटोज एयरपोर्ट र होक्काइडोको बिभिन्न ठाउँहरू बीच सञ्चालित छन्। लिमोसिन बस स्टपहरू अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन र डोमेस्टिक टर्मिनल भवनको पहिलो तल्लामा अवस्थित छन्।
जब तपाईं नयाँ Chitose एयरपोर्टमा पुग्नुहुन्छ, तपाईं प्रत्येक टर्मिनल भवनको पहिलो तल्लामा बस काउन्टरहरूमा जान सक्नुहुन्छ। तपाईंले त्यहाँ बसहरू जाँच गर्नु पर्छ र टिकट किन्नु पर्छ। र बस स्टपमा जाऔं।
>> लिमोसिन बसहरूको विवरणहरूको लागि कृपया नयाँ Chitose एयरपोर्टको आधिकारिक साइटको पृष्ठमा हेर्नुहोस्
रैपिड ट्रेन सप्पोरो र एयरपोर्ट स्टेशन बीचको १ every मिनेट = शटरस्टक बीच छुट्छ
नयाँ Chitose एयरपोर्टमा JR Hokkaido को स्टेशन छ। यो स्टेशन घरेलू टर्मिनल भवन को तहखाने मा छ। किनकि स्टेशन टर्मिनल भवनमा छ, तपाईं हिउँमा वा वर्षाको साथ भिजेको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। यो स्टेशन प्रयोग गरेर, तपाईं धेरै कुशलतासाथ सप्पोरो स्टेशन र ओटारु स्टेशनमा जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं जेआर द्वारा असहिकावा वा फुरानो जान चाहानुहुन्छ भने कृपया यस स्टेशनबाट सफोरो स्टेशन जानुहोस् र ट्रेनमा स्थानान्तरण गर्नुहोस्।
>> जेआर न्यू चिटोज एयरपोर्ट स्टेशनको समय सारिणीको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइटको यस पृष्ठमा सन्दर्भ गर्नुहोस्
जेआर मिनामी Chitose स्टेशन बाट
JR एक्सप्रेस ट्रेन Hokuto यात्रुहरु को लागी र on = शटरस्टक को लागी मिनामी Chitose मा रोकिन्छ
जेआर न्यू चिटोज एयरपोर्ट स्टेशनबाट १ स्टेशन लिनुहोस् र तपाईं जेआर मिनामी चिटोज स्टेशनमा आइपुग्नुहुनेछ। मिनामी चिटोज स्टेशनबाट, तपाईले JR ट्रेनहरू सवारी गर्न सक्नुहुनेछ जुन होक्काइडोको मुख्य पर्यटन स्थलहरूमा जान्छ। तपाईं पनि एक जस्तै एक्सप्रेस ट्रेन मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
कार भाडा कम्पनीहरूको काउन्टरहरू नयाँ Chitose एयरपोर्ट घरेलू टर्मिनल भवनको पहिलो फ्लोरमा पंक्तिबद्ध छन्। यस एयरपोर्टमा तपाईंलाई १० भन्दा बढी भाडा-एक कार कम्पनीहरू उपलब्ध छन्।
जे होस्, तपाईं यी काउन्टरहरूमा एक पटकमा कार उधार लिन सक्नुहुन्न। नयाँ Chitose एयरपोर्टमा, टर्मिनल भवनको अगाडि कार पार्कि forbidden निषेध गरिएको छ। त्यसो भए, तपाई कुन कार भाडा कम्पनी प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसको फरक पर्दैन, तपाईले भाडा कार कम्पनीको शाखामा फ्री बसमा जानु पर्छ। एयरपोर्टबाट ब्रन्च जाने समय कार भाडामा लिने कम्पनीमा निर्भर हुन्छ, तर यो साधारणतया बसमा १०-१-10 मिनेट हुन्छ। तपाईं कार फिर्ता गर्दा पनि, तपाईं ती शाखाहरूसँगै फर्कनु पर्छ, एयरपोर्टमा होईन।
>> जापानी कार भाडाको लागि, कृपया मेरो लेख यहाँ हेर्नुहोस्
यदि तपाईं नयाँ Chitose एयरपोर्टबाट सप्पोरोमा जानुहुन्छ भने, म जेआर ट्रेन प्रयोग गर्दछु। मैले पहिले नै यस पृष्ठमा परिचय दिएझैं नयाँ Chitose एयरपोर्टको तहखानेमा JR New Chitose एयरपोर्ट स्टेशन छ।
सप्पोरो स्टेशनका लागि, यो लगभग Chitose एयरपोर्टबाट JR रैपिड "एयरपोर्ट" बाट minutes 37 मिनेटमा छ। एक वयस्कको लागि मूल्य १,०1,070० येन छ।
यसैबीच, यो बस द्वारा लगभग 1 घण्टा छ। एक वयस्कको लागि मूल्य १,०1,030० येन हो। बसहरूको मामलामा, आवश्यक समय अझ लामो हुन सक्छ।
जहाँसम्म तपाईको गन्तव्य सफ्पोरो स्टेशन होईन तर साप्पोरो स्टेशन जस्तै सुसुकिनो र नाकाजीमा पार्क भन्दा टाढा छ भने यो बसको रूपमा प्रयोग गर्नु राम्रो हुन सक्छ। तपाईं बस द्वारा आफ्नो गन्तव्यको नजिक हराउन बिना जान सक्नुहुन्छ। विशेष गरी यदि तपाईंसँग धेरै सामानहरू छन् भने, बस अधिक आरामदायी हुन सक्छ।
जब तपाईं नयाँ Chitose एयरपोर्ट बाट Niseko जानुहुन्छ, यो बस वा भाडाको कार प्रयोग गर्नको लागि कुशल छ। बस कम्पनीहरू र ट्राभल कम्पनीहरूले तयार गरेका धेरै आरक्षणमा आधारित बसहरू नयाँ Chitose एयरपोर्टबाट सञ्चालित छन्। विशेष गरी जाडो मौसममा, त्यहाँ धेरै बसहरू छन्। अग्रिम आरक्षण गर्नुहोस्।
तपाईं निम्न साइटहरूमा बस बुक गर्न सक्नुहुन्छ।
>> होक्काइडो चुओ बस
>> होक्काइडो पहुँच नेटवर्क
>> स्की बस व्हाइट लाइनर
यदि तपाईं निसेको गाउँको हिल्टन होटेलमा बस्नुहुन्छ भने, निम्न आरक्षण प्रणाली बस प्रयोग गर्न सजिलो छ।
>> Niseko गाउँ एयरपोर्ट एक्सप्रेस
म नयाँ Chitose एयरपोर्ट बाट Niseko सम्म रेल प्रयोग गर्न सिफारिश गर्न सक्दिन। यदि तपाईं रेलमा जानुहुन्छ भने, तपाईं पहिले जेआर एक्सप्रेस "एयरपोर्ट" बाट ओटारु स्टेशन जानुहुनेछ। यात्रा समय १ घण्टा १ 1 मिनेट हो। अर्को, यसले लगभग १ घण्टा minutes० मिनेट ओटारु स्टेशनबाट निसेको स्टेशन पुग्न ट्रेनमा लिन्छ। यद्यपि रेलहरूको संख्या थोरै छ। निसेको स्टेशनबाट तपाईंले बस वा ट्याक्सी पनि आफ्नो होटेलमा लैजानु पर्छ।
निसेकोका लागि, कृपया निम्न लेखमा सन्दर्भ गर्नुहोस्।
Niseko! जाडो, वसन्त, गर्मी, शरद doतुमा गर्न उत्तम चीजहरू
निसेको जापानको प्रतिनिधि रिसोर्ट हो। यो विश्वव्यापी रूपमा परिचित छ, खास गरी जाडोको खेलको लागि एक पवित्र ठाउँको रूपमा। निसेकोमा, तपाईं स्किइ enjoyको मजा लिन सक्नुहुनेछ नोभेम्बरको अन्तदेखि मे महिनाको सुरूवातसम्म। माउन्टसँग मिल्दोजुल्दो सुन्दर पहाड छ। निसेकोमा फुजी। यो माथिको चित्रमा देखीएको "माउंट योटेइ" हो। ...
यदि तपाईं फुरानो जानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई कडा सिफारिश गर्दछु कि तपाईं नयाँ चिटोज एयरपोर्टको सट्टा असाहिकावा एयरपोर्टको साथ यात्रा गर्नुहोस्। Asahikawa एयरपोर्ट देखि Furano, यो लगभग एक घण्टा सीधा बस बाट छ। तपाईं JR ट्रेन द्वारा पनि सर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, असाहिकावा एयरपोर्टबाट फुरानो जाने मार्गमा तपाईं बिआइको सुन्दर दृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं नयाँ Chitose एयरपोर्ट बाट Furano जानुहुन्छ भने, कृपया जेआर ट्रेन वा पहिले बस सप्पोरो स्टेशन जानुहोस्। यात्रा समय minutes 37 मिनेट हो। अर्को, कृपया Takigawa स्टेशन एक्सप्रेस बाट जानुहोस्। यात्रामा करीव minutes० मिनेट लाग्छ। टाकीगावा स्टेशनबाट फुरानो स्टेशनसम्म, नेमुरो मुख्य लाइन सामान्य ट्रेनबाट about० मिनेट लाग्छ।
सप्पोरोबाट फुरानो सम्म, तपाईं पनि Asahikawa स्टेशन मार्फत जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं सप्पोरो स्टेशनबाट असाहिकावा स्टेशन जानुहुन्छ भने आवश्यक समय एक्सप्रेस द्वारा १ घण्टा २० मिनेट हुन्छ। Asahikawa स्टेशन बाट Furano स्टेशन को बारे मा १ घण्टा Furano लाइन सामान्य ट्रेन बाट छ। रेलबाट दृश्य यस मार्गमा सुन्दर छ।
गर्मी मौसममा, एक्सप्रेस ट्रेन "फुरानो लभेंडर एक्सप्रेस" जुन सप्पोरो स्टेशनबाट फुरानो स्टेशनको लागी सञ्चालित हुन सक्छ।
सप्पोरो बाट फुरानो सम्म, तपाईं बसमा जान सक्नुहुन्छ। सप्पोरो स्टेशनको अगाडि बस टर्मिनलबाट सीधा बस "फुरानो" बाट, फुरानो स्टेशनको लागि यो लगभग २ घण्टा 2० मिनेट हुन्छ। जहाँसम्म, यो बस Biei पास गर्दैन, तपाईं धेरै सुन्दर दृश्य आशा गर्न सक्नुहुन्न।
यदि तपाईं कारबाट नयाँ चिटोज एयरपोर्टबाट फुरानो जानुहुन्छ भने यात्राको समय २ घण्टा २ घण्टा 2० मिनेट हुनेछ। कृपया Chitose पूर्वी आईसी बाट Shimukppu आईसी को एक्सप्रेसवे प्रयोग गर्नुहोस्, त्यसपछि राष्ट्रीय सड़क २2चलाउनुहोस्। कुल दूरी करिब १२ 30 किलोमिटर छ।
पर्यटक खरीद उपहार वा स्मारिका, होक्काइडो, जापान = शटरस्टकको लागि नयाँ Chitose एयरपोर्टमा MUJI गो स्टोर जान्छ
नयाँ जापानको नयाँ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जापानमा एयरपोर्टको बिक्रीमा नयाँ कच्चा ताजा समुद्री खानाको बिक्री भित्र नयाँ जापानी समुद्री खाना स्टोर।
यदि तपाईं कपडा किन्न चाहानुहुन्छ जुन तपाईं होक्काइडो ट्राभलको बेला लगाउन सक्नुहुन्छ, तपाईं घरेलू टर्मिनल भवन दोस्रो तलामा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ UNIQLO र MUJI को स्टोरहरू छन्। यी लुगा र किराना पसलहरू बिहान 8 देखि साँझ 8 सम्म खुल्ला छन्।
घरेलु टर्मिनल भवनको दोस्रो तलामा होक्काइडोमा स्मारिकाका धेरै पसलहरू पनि छन्। जब तपाईं होक्काइडोबाट फर्कनुहुन्छ, कृपया यस भुइँमा अन्तिममा किनमेल गर्नुहोस् सबै तरिकाबाट।
यदि तपाईं केहि स्वादिष्ट खान चाहनुहुन्छ भने, तेस्रो तल्ला भुइँमा हिंड्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यहाँ रेमेन, सूप करी, चंगेज खान डिश इत्यादि जस्ता छन्। अवश्य पनि, त्यहाँ स्वादिष्ट मिठाइको पसलहरू पनि छन्।
"यातायात" मा फर्कनुहोस्
नरिता एयरपोर्ट! टोक्यो / अन्वेषण टर्मिनल १, २, to सम्म कसरी पुग्ने
हनेडा एयरपोर्ट! टोक्यो / अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलू टर्मिनलमा कसरी पुग्ने
कन्साइ एयरपोर्ट (KIX)! कसरी ओसाका, क्योटो / अन्वेषण टर्मिनल १, २ सम्म पुग्ने
सप्पोरो! जाडो, वसन्त, गर्मी, शरद doतुमा गर्न उत्तम चीजहरू